Iguzozi ahia ndi njem na mkpa nchekwa |
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » USA Akụkọ Akụkọ » Iguzozi ahia ndi njem na nchekwa
N'oge ọkọchị gara aga, ụlọ ọrụ ndị njem abụghị naanị na ha nwetara nnukwu mgbanwe mgbanwe ahịa, mana ọ hụrụ onwe ya n'etiti nsogbu kachasị njọ na akụkọ ntolite ya.
Ọbụlagodi afọ iri gara aga nke narị afọ nke iri abụọ, ọ bụghị ihe a na-anụkarị ịnụ ka ndị isi na-ahụ maka njem nleta na-ekwupụta nchegbu ha na ha na-atụ ụjọ na oke, ma ọ bụ nke a na-ahụ anya, omume nchekwa njem ga-eduga ndị ọbịa ụjọ na ibelata uru.
Mgbe ahụ COVID-19 ghọrọ eziokwu, ụdị nchekwa ọ bụla dịkwa mkpa.
Narị afọ nke iri abụọ na otu n'afọ nke iri nke atọ gbanwere echiche niile gara aga.
N'ime ụwa dị ize ndụ karịa karịa, ndị ọbịa na ndị njem nleta chọrọ ịma ihe nchekwa na nchedo ahụike a na-eme, otu a na-atụle nchekwa ha, na onye ha ga-atụgharị ma ọ bụrụ na mberede.
Ndị isi na-ahụ maka njem nleta na-achọpụta na enwere usoro mgbanwe dị iche iche na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ njem na echiche ndị ochie agaghịzi adị. N'ihi gọọmentị nyere iwu ka a kwụsị ime ụlọ na mkpa ọ dị ịrụ ọrụ site n'ụlọ, ibi na echiche azụmaahịa naanị afọ ole na ole gara aga dị oke egwu ma nwee ike ime ọdịiche dị n'etiti lanarị azụmaahịa na ọdịda.
Ndị ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ ndị njem na njem nlegharị anya na-anabata ma mesie nchebe ga-enwe ezigbo ohere ịlanarị na nke a gụnyere akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ, dị ka ogige mba, nke jikọrọ ya na gọọmentị. Ebe a na-enye nchebe dị mma agwakọtara yana ndị ahịa na-azụ ahịa nwere ezigbo ohere ịnagide na ịlanarị. Ọ bụ ezie na ọ nweghị onye nwere ike ịme nchekwa zuru oke, ma ọ bụ na anyị amaghị ihe ịma aka dị n'ihu, usoro ndị dị n'okpuru nwere ike inyere gị aka ịghọ obere ebumnuche wee gbakee ngwa ngwa. Ha nwere ike inyere gị aka iji nchekwa, nchekwa na ahụike dịka ngwa ahịa. Isi ihe bụ ịmalite na ihe ịga nke ọma ma jiri ihe ịga nke ọma na-ewuli elu.
• Nchebe na nchekwa, na ahụike ọha na eze nwere ike ịpụta ihe dị iche nye ndị ọkà mmụta na gọọmentị US, mana na mba njem ha bụ otu. Na post-Covid Oge ọ dị mkpa ka anyị mata na mmiri na-egbu mmadụ, nsachaghị ọcha, na egbe egbe nwere otu nsonaazụ ahụ: mbibi nke azụmahịa gị. Ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ njem na njem nleta na-aghọta mmekọrịta dị n'etiti njikwa ihe egwu na nchekwa. Ha bụ akụkụ abụọ nke otu mkpụrụ ego. Ebe a na-enweta mgbasa ozi na-ezighi ezi, n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na-ezighị ezi, ga-arụ ọrụ iji gbanwee echiche ahụ ma ọ bụrụ na ha nwere olileanya ịlanarị.
• Beautchọ mma na nchekwa na-aga aka na aka. Mgbe gburugburu ebe nchekwa, ọbịa na-enwekwa nchekwa. Ndị njem nleta na-ahụ maka njem nleta maara na nchekwa dị mma na-amalite na a nghọta nke nchekwa. Site na ihicha okporo ámá gị, kụrụ okooko osisi, osisi na obere obere ubi gburugburu obodo gị, ọ bụghị naanị na ị ga-ebelata ohere ọ ga-abụ na mpụ ga-eme kama ị na-emekwa ka ọchịchọ onye ọbịa nwee ike iwepụta oge na obodo gị. Jide n'aka na mgbe ị na mpaghara mpaghara ime ya dị ka ụkpụrụ nke CPTED (mgbochi mpụ site na gburugburu ebe obibi imewe).
• Kpachara anya banyere onye ị họọrọ ịkpọbata n’obodo gị inye ndụmọdụ. Ndị ọkachamara maka njem nleta ga-amata ma ndị njem na nchekwa. E nwere ọtụtụ mahadum na-enye ọmụmụ na njem ma ole na ole na-aghọta mmekọrịta dị n'etiti ndị njem na njem na njem. Kpọọ ndị nwere ike inyere obodo aka ọ bụghị naanị idozi nsogbu kama ịkwalite ọhụụ. Nleta njem nleta nwere ike ịbụ ngwa ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ akụkụ nke ọhụụ zuru oke nke obodo. Nke ahụ pụtara na ọhụụ ahụ ga-anabata ndị na-adọrọ mmasị mpaghara, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ngalaba ndị uwe ojii, ndị na-aza ajụjụ mbụ, njikwa ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ, ndị nwe ụlọ oriri na ọ authoritiesụ restaurantụ, na ndị ọrụ njem.
• Mgbe ike uche ziri ezi nke nche, nchekwa mgbe ọ na-abịakwute ahụ ike nke ndị ọbịa. Ya adịla mgbe ị ga-ekwe nkwa ihe ị na-apụghị imezu. Ọdachi azụmaahịa na-eme ma ọ bụrụ na eziokwu adabaghị na atụmanya. Zụọnụ ma kwadebe obodo gị iji nwee nchekwa na nchekwa. Ezi nchekwa abụghị okwu nke ihe nkpuchi gas, mana mgbagha dị mfe. Lelee iji jide n'aka na akara aka gị ziri ezi, nyochaa usoro okporo ụzọ, ma nye ozi njem nlegharị anya na nọmba mberede.
• Zụlite mbọ nkwado gị na ndị uwe ojii mpaghara gị na ngalaba ọkụ, ndị na-eweta enyemaka mbụ, ndị ọrụ ahụike na ụlọ ọgwụ. Gbaa mbọ hụ na ndị mbido gị, ma ndị ọha na eze na ndị na-akwụ ụgwọ na-amata otu nchekwa njem nlegharị anya dị mkpa maka njem. Dịka ọmụmaatụ, ọ dịbeghị mgbe a zụrụ ọtụtụ ndị uwe ojii ọzụzụ na nchekwa nchekwa njem nlegharị anya. Ọ dị mkpa ịnwe mmadụ ka gị na ndị uwe ojii mpaghara gị, nchekwa onwe gị, ngalaba ụgbọ ihe mberede, yana ngalaba enyemaka mbụ nwere ike "ịtụgharị" n'etiti njem nleta na nsogbu nchekwa. Imirikiti ndị ọrụ njem njem amaghị na ndị uwe ojii na ngalaba ọkụ na-agbaso usoro ọrụ gọọmentị Weberian siri ike. Ọ bụrụ na ndị isi ndị uwe ojii ngalaba gị anaghị akwado amụma nchekwa njegharị na ọzụzụ nke ndị isi, yabụ enwere ike ịkọ nkwado ndị uwe ojii. Nyere onye isi gị aka ịghọta na nchebe njegharị bụ ezigbo azụmaahịa ọ bụghị naanị maka obodo kamakwa maka ngalaba ya. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ngalaba ndị uwe ojii ka kwenyere na ọrụ ha bụ ị nweta ego maka obodo ha site na inye tiketi tiketi. Mee ka ndị ọchịchị obodo gị kọwaara ngalaba ndị uwe ojii gị na iwu ndị ahụ abụghị nke oge ochie kama ọ na-arụpụtaghị ihe ọ bụla.
• Nye nzukọ ọmụmụ maka ndị ọrụ nchekwa na nchekwa gị. Ngalaba na-arụ ọrụ nke mbụ ga-adịkwu njikere inye aka na nchekwa njem nleta ma ọ bụrụ na ha hụkwa uru ọ bara. Gosi ha uru nke njem site na njem nwere ike inye aka zuta akụrụngwa ọhụụ, kwụọ ụgwọ ọkwá ọhụrụ ma ọ bụ nyere aka na mmefu ego ha.
• Gbaa ndi okacha amara nche nche njeghariri na ndi nche nche ka ha bia ma ndi mmadu bia ma ndi mmadu ma ndi mmadu. A na-eme ogbako nchegharị njem nlegharị anya kacha ochie na ama ama kwa afọ na Las Vegas. Ugbu a, ọtụtụ n'ime nzukọ ndị mmadụ na-adịghachi ndụ mgbe otu afọ gachara n'ihi ọrịa na-efe efe. Onye isi CVB ọ bụla kwesịrị ịnwe onye nnọchi anya na ọgbakọ nchekwa njem nleta yana opekata mpe otu onye n'ime ndị ọrụ nchekwa iwu ya.
• Mara ihe adịghị mma na obodo gị ma soro ndị gọọmentị mpaghara rụọ ọrụ iji melite nsogbu nchekwa ndị a. Kedu ka ọdụ ụgbọ elu mpaghara gị dị? Ndi nyochachara ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ andụ restaurantụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ? Ugboro ole ka anyị na-enyocha maka usoro ahụike emelitere? Ugboro ole ka ndị ọkwọ ụgbọ ala na-elekọta ma ọ bụ na-ewepụghị ụgbọala ha? Companieslọ ọrụ ndị na-agagharị agagharị hà na-enye ndị ahịa ha ihe ha kwere ná nkwa? Ugboro ole ka a na-ezuru nọmba kaadị kredit dị ka akụkụ nke aghụghọ wayo izu ohi? Kedu nsogbu nchekwa cyber dị ma ọ bụ nwee ike ịdị?
• Mara onye na-agụ akwụkwọ na mahadum dị na mpaghara gị, ọkachasị n'ihe ọmụmụ injinịa yana onye ji ọrụ agụmakwụkwọ ya mere nledo. Studentsmụ akwụkwọ mahadum na-eme ihe mmekọrịta ọha na eze dịka a ga - asị na ha bụ ndị ọbịa ogologo oge. Ọtụtụ mahadum na-anabata ụmụ akwụkwọ si mba ọzọ, bụ ndị ha amachaghị banyere ha. Studentsmụ akwụkwọ mahadum ọ bụ ndị obodo ha dị mma ka ọ bụ na-adịghị mma? Studentsmụ akwụkwọ mba ọzọ nọ ebe ahụ naanị maka mmụta mmụta ma ọ bụ na ha nọ na nzuzo. Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya kwesịrị iso ndị ọchịchị mahadum na ndị ọkachamara n’ihe gbasara nchekwa arụ ọrụ ịghara ịgabiga iwu, kamakwa nwee ezigbo echiche banyere onye nọ n’obodo ha na ihe kpatara ya.